Imise milyan ayuu ku kacayaa heshiiska ay Kooxda Manchester City kula soo wareegeyso Kalidou Koulibaly? – Gool FM
Imise milyan ayuu ku kacayaa heshiiska ay Kooxda Manchester City kula soo wareegeyso Kalidou Koulibaly?
(Manchester) 05 Seb 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan Waddanka Ingiriiska ayaa la soo warinayaa inay ku dhowdahay inay la soo saxiixato daafaca Kalidou Koulibaly, iyadoo xiddiga xulka qaranka Senegal ka gudbinaysa dalab qaali ah.
Kooxda reer England ee Manchester City ayaa sii kordhisay baacsiga ay ugu jirto soo xero gelinta xiddiga daafaca dhexe uga ciyaara kooxda reer Talyaani ee Napoli, Kalidou Koulibaly.
Manchester City oo doonaysa inay xilli ciyaareedkan cusub ku tartanato hanashada horyaalka Premier League ayaa ku dhibtootay inay saxiixa laacibkan heshiis kala gaarto kooxda ka dheesha horyaalka Serie A.
Yeelkeede, sida uu warinayo Suxufiga looga dambeeyo dhanka suuqa kala iibsiga xiddigaha ee Di Marzio ayaa warinaya in Man City ay u muuqato mid diyaar u ah inay la jaan qaaddo qiimaha lagu doonayo Koulibaly oo ah 67 milyan oo gini oo u dhiganta 75 milyan oo euro ama 89 milyan oo dollar.
Musharraxa xilka Madaxweynaha Kooxda Barcelona oo ballan qaad adag u sameeyay Lionel Messi